Kalandarka Lunar | January 2020
Ugu Weyn Ee Kalandarka Lunar
Kaadi-jaridda kaabajka dabaysha bishii October 2019
Jadwalka Dayaxa, marxaladaha wareegyada dayaxa waxaa lagu soo bandhigaa, taas oo ah, isbeddel ku yimaadda qaabka dibadda, iyadoo ku xiran sida qorraxda ay u iftiimiso qaybaha dhulka satellite-ka. Bishii Lunar waxay socotaa 29-30 maalmood waxayna ka kooban tahay 4 marxaladood oo qadar ah oo saameeya bani-aadmiga iyo geeddi-socodka badan ee caalamkeenna. Waxaa la rumeysan yahay in, waxyaabo kale, waxay saameyn ku dhadhan iyo tayada diyaarinta jiilaalka, gaar ahaan - Sauerkraut.
Sauerkraut ama kaabash pickled waa marti joogta ah miisaska inta lagu jiro xilli qabow, sababtoo ah marka laga reebo dhadhanka basbaaska iyo tartiib tartiib ah, waxay leedahay bogsiinta guryaha iyo sidoo kale isha ee walxo badan oo faa'iido leh iyo fitamiino. Kuwa ka mid ah kuwa badanaa ku hawlan salting kaabajka, qaar badan ayaa lagu heshiiyaa kalandarka dayaxa, sababtoo ah xitaa haddii aad raacdo tiknoolijiyada isku midka ah iyo bukaanka, waxaad heli kartaa natiijo gebi ahaanba ka duwan.
Qaababka ku salaysan kaabajka jaalaha ah
Sauerkraut waa hodan ku jirta fitamiinada, taas oo saameyn togan ku leh habka geedka caloosha. Saxanka waa fududahay in la diyaariyo, laakiin gurigeyga khibradda leh way ogyihiin in sida ku qoran kalandarka dayaxa ay jiraan maalmo wanaagsan oo geedi socodkan ah. Pickles, laga goostay maalinta saxda ah, dhadhan fiican leh iyo muddo dheer kaydiyey.
Qaababka ah geedo beerto beerta jardiinaha iyo beerta
Hadda, beeralayadu waxay diyaar u yihiin inay si sii kordhaan u noqdaan jadwalka dib-u-xigeenka, maaddaama fikradda beeraha biodynimadu ay noqotey mid caan ah. Beeraha Biodynamic waxay ku salaysan tahay beerashada dhirta, kaas oo beeraleydu ku tiirsan yihiin wejiyada dayaxa. Saamaynta dayax-gacmeedka dunida ee ku saabsan dhirta ayaa lagu arkay dadka tan iyo wakhtiyadii hore, laakiin wakhtigan ayaa saamayntan horeyba loo soo cadeeyay cilmi ahaan.
Lunar Sowing Calendar ee May 2019
Bishii kasta ee sanadka waxa ay maalinteeda ku wanaagsan tahay arrimaha beeraha, laguma talinayo in aad dhulka ku shaqeyso. On jadwalka of shuqullada beerta-gardererka May, 2019, oo leh talooyin of jadwalka Dayaxa iyo quruxdeeda of isticmaalkeeda, si faahfaahsan - ee maqaalka. Saameynta Saacadda Dayrta ee Geedaha Geedaha Sida dayaxa u soo dhowaado ama ka baxo Earth, wuxuu xajistiisu saameysaa qoyaanka dhulkeena.
Sauerkraut waa mid ka mid ah jiiska ugu jecel xilliga jiilaalka. Ka sokow xaqiiqda ah in uu leeyahay dhadhan fiican, waxaa loo arkaa bixiye gaar ah oo ascorbic acid, fiber iyo enzymes. Si aad u samayso dhogorta kaabajka ah iyo casiir badan, gurigeyaal badan ayaa duubaan badeecada maalmo gaar ah oo ka mid ah jadwalka Dayaxa.
Tilmaamo ka mid ah halsano kaabajka ah ee bishii November sida ay sheegayso kalandarka dayaxa
Sauerkraut waa cunto fudud oo dhadhan fiican leh. Natiijada ugu fiican waxaa la helaa haddii aad raacdo jadwalka Dayaxa. Maalmood ee bisha Noofambar waa kuwa ugu wanaagsan ee loogu talagalay khudradda pickling, hoos ku akhri. Sidee ayay u wanaagsan tahay in la goosto kaabajka goosashada kaluunka? Awowayaasheenu waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan beeritaanka dhirta dabiiciga ah ka dib Oktoobar 14 (iidada Shahaadada) sida waafaqsan wejiyada qaddarinta.
Qalabka jadwalaha lunar sannadkii 2019 ee Belarus
Qaybta beeraha iyo beeraha ubaxa ee Belarus ee 2019-ka ayaa gacan ka geysanaya in si fudud loo ogaado maalmaha wanaagsan iyo kuwa xun ee beeridda dhirta. Maxay yihiin dhacdooyinka Lunar, iyo sidoo kale saameynta jaantuska Earth ee dhaqanka - akhriya hoosta. Maxaa saameynaya wejiyada dayaxa ee koritaanka dhirta Waxaa la aaminsan yahay in wareegyada lacaga ay saameynayaan kobaca iyo horumarinta beeraha noolaha.
Qodobbada beeraha Lunar ee 2019 ee gobolka Moscow
Helitaanka dalag tayo leh had iyo jeer laguma dammaanad qaadi karo xirfadaha iyo aqoonta dadka degan xagaaga. Taasi waa sababta beeralayda waayo-aragnimo ah waxay sidoo kale tixgelinayaan jadwalka lunar, taas oo ku saleysan xeerarka dabiiciga ah waxayna awoodaan inay tilmaamaan maalmaha ugu wanaagsan ee aan ahayn beeritaanka iyo beeritaanka dhirta kala duwan, laakiin sidoo kale loo bedelo iyo noocyo kala duwan oo shaqo ah oo ku yaalla goobaha, kuwaas oo had iyo jeer saameyn ku leh natiijada kama dambaysta ah. .
Kalandarka beeraha ee Lunar bilaha Janaayo 2019
Qorsheyso shaqadaada ubaxyada bisha Janaayo iyadoo la adeegsanayo jadwalka geedka canabka ah. Waxay kaa caawin doontaa in la go'aamiyo waqtiga loo beerayo ama dib u kobcin dalagyada gudaha. In badan oo ku saabsan this ee article. Sidee wejiga dayaxu u saameeyaa dhirta Qalinka Dayaxa waa bayaan fudud oo ku saabsan wejiyada dayaxa bisha dhexdeeda. Waxaa jira afar weji oo isugeyn ah: dayaxa sii kordhaya, dayaxa oo buuxa, biloowga dayaxa iyo bisha cusub.
Qodobbada beeraha Lunar ee beerta nadaafadda bishii November 2019
Dayaxa wuxuu shaki ku jiraa Dhulka. Soo jiidashada lunar, awood u leh kor u qaadista iyo hoos u dhiga malaayiin tan oo biyo-biya-bare ah, oo sameysma xayawaan iyo xayawaan, waxay u egtahay inay saameyn ku yeelato dhammaan nolosha adduunka, oo ay ku jiraan dhirta. Kalandarka beeritaanka ee Lunar waxay ku salaysan tahay dhacdadan, kaas oo looga doodi doono maqaalka.
Kalandarka beeraha ee bilaha December 2019
In maskaxda dadka intiisa badani, xitaa kuwa haysta wax la xiriira beeraha, kalandarka xilliga beeraha ayaa la xidhiidha bilaha guga iyo bilaha xagaaga, sababtoo ah waxay ahayd waqtigan xaadirka shaqada beeraha (xaalad kasta, dadka deggan waqooyiga dhexe) waxay u muuqataa mid khuseysa
Jadwalka qorshaynta ee 2019 ee Siberia ee beerta iyo beerta
Si beerista guul leh ee beerta iyo dalagyada dhirta, beeralayda waxay u arkaan nooc kasta oo macnaheedu yahay, midkastaana waa kalandarka dayaxa. Siberia way kala duwan tahay qaybta dhexe ee cimilada kaliya, laakiin sidoo kale marxalado qaddarin ah oo kala duwan, sidaas darteed, astrologers waxay sameeyaan jadwal gooni ah ee beeraleyda Siberian, beerta iyo beerta.
Qodobbada qorshaynta ee 2019 loogu talogalay inuu bannaanka u yahay iyo bannaanka
Bannaanka u badan oo ku hawlan beerashada khudradda iyo miraha, waxay sameeyaan beerto, diiradda saara taariikhaha wanaagsan ee kalandarka labka ah. Tani maahan mid la yaab leh, sababtoo ah saameynta Earth ee satellite-ka ah ee dhammaan noolaha noolaha iyo geeddi-socodka ee ku yaalla meeraha ayaa muddo dheer la ogaa. Sidee wejiga dayaxu u saameeyaa dhirta, iyo marka ay u fiicantahay in lagu fuliyo waxqabadyada beeraha - intaa sii dheer maqaalkan.
Qodobbada beeraha Lunar beerta beerta ee August 2019
Dadku waxay wakhti dheer ogaadeen saameynta bisha ee dhammaanba nolosheena ku nool deegaankayaga, iyo marka ay qorsheynayaan shaqadooda goobta, ma ahan mid la yaab leh in awoowayaasheena ku lug leh dhirta beeraha sii kordhaya ay isku dayeen in ay diirada saaraan xaaladaha cimilada keliya, laakiin sidoo kale wejiyada "xiddiga yar". Si aad u liidata, kalandarka dayax-qoriga lama midoobin mudnaanta koowaad ee casriga ah ee horumarinta tiknoolajiyada cusub iyo helitaanka cilmi-baarista.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kalandarka Lunar 2020